ကဲ အောက်မှာတော့ အခုအချိန်ဆိုရင် window7ကို Download လုပ်ပြီးလောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ် .. ရက် 30 ပဲ ရတယ်ဘာညာပေါ့ . အဲ့ဒီ့တော့ အောက်မှာလဲ window7activator နဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ သူတွေ ရှိသလို အဆင်မပြေတဲ့ သူများအတွက်လဲ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ် . အခုထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . လုပ်နည်းကိုလဲ ရေးပေးပါဦးမယ် . အောက်က loader နဲ့အဆင်မပြေသူများအတွက် အသစ် ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . ကျွန်တော် အခု ဒီကောင်လေးနဲ့ သုံးနေတာပါ . လုပ်နည်း .. (၁) ပထမဦးဆုံး antivirus program ကို ပိတ်ထားလိုက်ပါ . (ဥပမာ kaspersky ဆိုရင် right click >> pause protection ကို နှိပ်ပြီး pause ကိုနှိပ်ပါ ) (၂) ပဲ ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ . အောက်ကပေးထားတဲ့ loader လေးကို Double click နှိပ်လိုက်ပါ(၃) ပြီးရင် install ကို ဆက်နှိပ်လိုက်ပါ . ပြီးတာနဲ့သူက restart တောင်းပါလိမ့်မယ် restart ပေးလိုက်ပါ .(၄) ကွန်ပျူတာ ပွင့်လာတာနဲ့ window is activated ဆိုပြီးတော့ ပေါ်နေပါလိမ့်မယ် . (၅) ကဲဒါဆိုရင်တော့ အားလုံးအိုကေသွားပြီလို့ ထင်ပါတယ် . ကဲ micorsoft က မနေ့တစ်နေ့ကမှ ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ window7ကို ကျွန်တော်တို့ ရွှေမြန်မာတွေ အသုံးပြုလို့ရသွားပါပြီဗျာ . ကောင်းသလားတော့ ပြန်မမေးနဲ့ ထောင်းချက်ထားတာကမှ ညံ့ဦးမယ် . window7OS ကိုရေးတဲ့ သူတွေကိုတော့ တစ်ကယ့်ကို ချီးကျူးတယ်ဗျာ . တစ်ကယ့်ကို လက်ဖျားခါတယ် . ကဲ activated ဖြစ်ဖို့ key ကို အောက်မှာ ယူလိုက်ပါ . လိုလိုမယ်မယ် ၃ ခုတောင် ထည့်ထား ပေးလိုက် တယ်နော် .Download ifile.it ၊ Download mediafireကဲ ကီးတွေကိုပါ တင်ပေးလိုက်တယ် . လုပ်ချင်တဲ့ ကီးနဲ့သာကိုင်စေဗျာ . Key တွေကို ဒီမှာ Download လုပ်လိုက်ပါ .
Microsoft Windows7activated (no serial / patch)
LINKတွေ သေကုန် ရင်မမီမှာ စိုးလို့ အမြန်ဆုံးဒေါင်းကြပါ . microsoft က window7လင့်တွေကို တွေ့တာနဲ့ ဖျက်ခိုင်းတာပါ . မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေအတွက် တော့ နေကြပါဦး . ကျွန်တော် တင်ပေးနေပါတယ် . ဖိုင်ကများတော့ မနည်းတင် နေရတယ် .Download Microsoft Windows7Activated x32 & x64 Rapidsharehttp://rapidshare.com/files/296912235/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.017http://rapidshare.com/files/296912232/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.016http://rapidshare.com/files/296912190/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.018http://rapidshare.com/files/296912174/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.015http://rapidshare.com/files/296912162/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.012http://rapidshare.com/files/296912130/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.014http://rapidshare.com/files/296912108/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.013http://rapidshare.com/files/296912019/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.011http://rapidshare.com/files/296911954/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.010http://rapidshare.com/files/296911780/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.009http://rapidshare.com/files/296911663/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.008http://rapidshare.com/files/296911504/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.006http://rapidshare.com/files/296911474/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.007http://rapidshare.com/files/296911270/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.004http://rapidshare.com/files/296911213/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.005http://rapidshare.com/files/296911106/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.001http://rapidshare.com/files/296911100/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.003http://rapidshare.com/files/296911032/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.002Download Microsoft Windows7Activated x32 & x64 Hotfilehttp://hotfile.com/dl/15505918/e4cffcf/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.001.htmlhttp://hotfile.com/dl/15506009/b8f2733/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.002.htmlhttp://hotfile.com/dl/15506080/2816f5e/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.003.htmlhttp://hotfile.com/dl/15506146/a28834c/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.004.htmlhttp://hotfile.com/dl/15506222/b43f3a4/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.005.htmlhttp://hotfile.com/dl/15506259/bfe59c3/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.006.htmlhttp://hotfile.com/dl/15506338/27b60a0/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.007.htmlhttp://hotfile.com/dl/15506374/c4a4efd/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.008.htmlhttp://hotfile.com/dl/15506434/2644544/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.009.htmlhttp://hotfile.com/dl/15505903/0a5ceb8/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.010.htmlhttp://hotfile.com/dl/15505960/ceda88b/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.011.htmlhttp://hotfile.com/dl/15506066/0533467/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.012.htmlhttp://hotfile.com/dl/15506138/602a9e1/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.013.htmlhttp://hotfile.com/dl/15506195/f308c97/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.014.htmlhttp://hotfile.com/dl/15506248/9cfbed7/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.015.htmlhttp://hotfile.com/dl/15506289/04d775b/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.016.htmlhttp://hotfile.com/dl/15506327/41313ec/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.017.htmlhttp://hotfile.com/dl/15506361/787dfc7/win7.x86-x64.ACTiVATED-egydown.iso.018.htmlDownload Microsoft Windows7Activated x32 & x64 Megauploadhttp://www.megaupload.com/?d=ZHHPENGFhttp://www.megaupload.com/?d=4D9N56ZHhttp://www.megaupload.com/?d=FKD1Q7RHhttp://www.megaupload.com/?d=6S9PO4G9
လာပါပြီဗျာ SUPERAntiSpyware Pro 4.2 with keygen and patch
ကဲ ကျွန်တော်တို့ တစ်ချို့ မိန်းကလေးတွေ ဆိုရင် keylogger ရဲ့ မစမှုကြောင့် အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်း ဖြစ်ကြတာလဲ မနည်းပါဘူး . keylogger က ကျွန်တော်တို့သိတဲ့ ရိုးရိုး keylogger ကတော့ keylogger ကို ဖွင့်ထားရင် task manager ကနေ ပြန်ခေါ်ပြီး ကြည့်ရင် ရကောင်းရနိုင်ပေမယ့် actual keylogger မျိုးကျတော့ တော်ရုံတန်ရုံနဲ့ ရှာလို့မရပါဘူး . တော်တော်များများ သိထားကြတာက keylogger ဆိုရင် task manager ကနေ ခေါ်ပြီးတော့ ပိတ်ထားရင် ရပြီလို့ သိထားကြတာပါ . အဲ့ဒါဆိုရင် task manager ကို ကြည့်လို့ keylogger မတွေ့ရင် မတင်ထားဘူးဆိုပြီး ပြောချင်တာပြော၊ ဆိုချင်တာဆိုရင်တော့ အောင်မငီးအမေရေ သားအဖြစ်ကို လာကြည့်လှည့်ပါဦး ဆိုတာထက် ဆိုးသွားမယ် . အခုအချိန်မှာ လက်တည့်စမ်းချင်ကြတဲ့ ညီအစ်ကိုများ နဲ့ သွားတွေ့လို့ကတော့ နားကားပြီသာပြင်ပေတော့ . အဟဲဟဲ . ကဲ အခုပေးတာလေးက ဘာတွေ စွမ်းဆောင်ပေးလဲ ကြည့်ကြည့်ပါ . သူက Spyware, Adware, Malware, Trojans, KeyLoggers, Dialers, Hi-Jackers, နှင့် Worms. စတာတွေကို လက်ရှိသုံးနေတဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ တင်ထားတဲ့ program ကို ထိခိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့ ဖယ်ရှားပေးပါတယ် . အဟဲ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ သဘောပေါက်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ် . တစ်ချို့ program တွေမှာ malware ကပ်ငြိနေတယ်ဆိုရင်တောင် မှ သူက ထိခိုက်မှုမရှိဘဲ ဖယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ မဆိုးဘူးလို့ဆိုရမှာပါပဲ . ကောင်းတာလေးက ဘယ် keyloggers မျိုးမဆို သူက သိနိုင်ပြီး ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ် . ကဲ စမ်းကြည့်လိုက်ကြပါဦး . ဟုတ်လားမဟုတ်လား . actual keylogger တင်ပြီးတော့ စမ်းပြီး စစ်ကြည့်ပေါ့ .ကဲအောက်မှာ ယူလိုက်ပါ .Download ifile.it ၊ Download mediafire
kaungkin "အစ်ကိုရေ Mozilla firefox မှာ webpage တွေကို Right Click လုပ်လို့ မရတော့လို့ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဆိုတာ သိချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ"ကျွန်တော် တစ်ခုအသိပေးချင်ပါတယ် . အားလုံးကို အခုကျွန်တော်တို့ firefox က 3.5 ထွက်နေပါပြီ . အဟောင်းကို သုံးနေတဲ့သူများ update လုပ်လိုက်ကြပါ . kaungkin က အဟောင်းနဲ့တူတယ်. အောက်ကနည်း (၃)မျိုးမှာ အဆင်ပြေတာနဲ့ သုံးကြည့်လိုက်ပါ . အဆင်ပြေမှာပါ . တစ်ခုပြောချင်ပါတယ် . OS က အခုတင်ထားတာ window လား ..နည်းလမ်း(၁) ယခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ firefox ကို ဖြုတ်ပြီး ဒီ ကနေ အသစ်ဒေါင်းပြီးတော့ ပြန်တင်လိုက်ပါ . နည်းလမ်း(၂) ဒီကနေ Browse in the Fast Lane ကို download လုပ်ပြီး စမ်းသုံးကြည့်ပါဦးနည်းလမ်း(၃) Tools >> Add-ons >> find update ကို နှိပ်လိုက်ပြီးရှာလိုက်ပါ . ပြီးတာနဲ့ သူကနေ update မဖြစ်တာတွေကို တစ်ခုမကျန် အကုန်လုံးကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု install လုပ်လိုက်ပါ . တစ်ခုမှ မချန်ထားပါနဲ့ . တွေ့သမျှဟာကို install လုပ်လိုက်ပါ .
သီဟဇော် ".net framework software ကို free download ဆွဲချင်လို့ ဘယ်မှာ ဆွဲရမလဲ ပြောပြပေူပါခင်ဗျာ...."The Microsoft .NET Framework 3.0 is the new managed code programming model for Windows®. It combines the power of the .NET Framework version 2.0 with new technologies for building applications that have visually compelling user experiences, seamless communication across technology boundaries, and the ability to supportawide range of business processes. These new technologies are Windows Presentation Foundation, Windows Communication Foundation, Windows Workflow Foundation, and Windows CardSpace. The .NET Framework 3.0 is included as part of the Windows Vista™ operating system; you can install it or uninstall it using Windows Features Control Panel. This redistributable package is for Windows XP and Windows Server 2003.System Requirements:Supported Operating Systems: Longhorn (Windows Code Name) ; Windows Server 2003 Service Pack 1; Windows Vista; Windows XP Service Pack 2.NET Framework 3.0 (32bit) >> Download rapidshare.NET Framework 3.0 (64bit) >> Part(1) ၊ Part(2)ဒါကတော့ microsoft က ပေးထားတဲ့ direct link ပါ.Net framework 1.1 Download (or) Download mediafire (or) Download ifile.it .net Framework 2.0 Download.net Framework 3.0 Download.net framewordk 3.5 Download
ကဲ ဦးဦးဖျားဖျားလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . Registry booster လေးပါ . ရရချင်းပဲ တင်ပေးလိုက်တာပါ . ကဲ download လုပ်ချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ ကိုင်လိုက်ပါ . အခုတစ်လော အလုပ်တွေ ပိနေလို့ ပို့စ်တွေတောင် တင်ဖို့မအားဘူးဖြစ်နေတယ် . အားတဲ့အချိန်လေး တင်ပေးလိုက်တာပါ . အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ..
ထောင်ဖောက်တယ်ဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော့်ကို တစ်မျိုးမထင်ကြနဲ့ဦး .ထောင်ဖောက် တယ်ဆိုတာက တင်စားလိုက်တာ . ကျွန်တော်တို့ apple ကနေ ထုတ်တဲ့ iphone တွေမှာက စပြီး ထုတ်ကတည်းက သတ်မှတ်ချက် တွေနဲ့ပါ . သီချင်းကို ပြန်ပြီး ကူးထည့်လို့မရအောင် လုပ်ထားတာမျိုး၊ sim card ကို သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ နိုင်ငံမဟုတ်ရင် လိုင်းမ၀င်အောင် လုပ်တာမျိုး၊ နောက်တစ်ခုက iphone ထဲမှာ ဆော့မည့် ဂိမ်းများနှင့် အခြားသော တိုလီမိုလီများကို install လုပ်ဖို့အတွက်ကို ပိုက်ဆံသွင်းပြီး အကောင့် လုပ်ထားမှ ရမယ့်စနစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါတယ် . အဲ့ဒါကို ကျွန်တော်တို့က အခုလို jailbreak လို့ခေါ်တဲ့ ထောင်ဖောက်နည်းကို သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင် Sim card ကို international sim card အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ . apple က မဟုတ်တဲ့ တစ်ခြား ပြင်ပ game တွေကိုလဲ download လုပ်ခွင့်ရရှိမှာပါ .. ကဲပထမဦးဆုံး ကျွန်တော်တို့ အောက်က နည်းအတိုင်းစမ်းကြည့်ရအောင်ဗျာitunes ကို ဖွင့်ထားလိုက်ပါ . itunes မရှိရင် ဒီမှာ ရေးပေးထားပြီးသားပါ ယူလိုက်ပါ . iphone ကို unlock လုပ်ဖို့အတွက် iphone ကို unlock နှင့် jailbreak လုပ်ရန် နှစ်နည်းရှိပါတယ် . Redsnow နှင့် လုပ်တာရယ် . Quickpwn နှင့်လုပ်တာရယ်ပါ . အခုကတော့ redsnow ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ unlock လုပ်နည်းကို ပြောပြပါ့မယ် . redsnow ကို အောက်မှာ တင်ပေးထားပါတယ် . ဒီမှာ Download လုပ်လိုက်ပါ ကဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ . iphone ရဲ့ fireframe တွေကို ဒေါင်းလိုက်ပါ . ကျွန်တော့် iphone က 3G ဆိုတော့ ဒုတိယက fireframe ကို ဒေါင်းလိုက်ပါတယ် . တစ်ကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ fireframe က ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် သူက ကျွန်တော်တို့ pc မှာ အသုံးပြုဖို့ တင်တဲ့ window operation system လိုပါပဲ . သူက iphone ကို သုံးလို့ရအောင် iPhone Firmware 3.0.1 ကို ထည့်ရတာပါ . မျက်စိထဲ မြင်အောင်လို့ပါ . အောက်မှာယူလိုက်ပါဦး .3.0.1 ( 2G): iPhone1,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw3.0.1 ( 3G): iPhone1,2_3.0.1_7A400_Restore.ipsw3.0.1 (3GS): iPhone2,1_3.0.1_7A400_Restore.ipswredsnow ကို ဖွင့်ပြီး browse နေရာတွင် အပေါ်က မိမိထည့်မယ့် fireframe ကို ရွေးပြီးထည့်လိုက်ပါ . (၁) ပြီးတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ power button ကို4second နှိပ်ပါ ... (iphone ပိတ်သွားပါလိမ့်မယ်) (၂) လက်ကိုမလွှတ်သေးဘဲနဲ့ ဆက်ပြီးတော့ နှိပ်ထားပါ . power button တစ်ဖက်နှင့် နှိပ်ထားရင်းကနေ အခြားတစ်ဖက်နဲ့ home button ကို 10 second နှိပ်ထားပါ (နှစ်ခုစလုံးတွဲပြီး နှိပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်) နားမလည်ရင် သေချာပြန်ဖတ်ပါ . ဒါက အရေးကြီးပါတယ် . (၃) နောက်ဆုံး home button 1 ခုထဲ နှိပ်ထားပါ (power botton ကို လွှတ်လိုက်ပါ) . ဆက်နှိပ်ထားရင်းကနေ သူစပြီးတော့ install စလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ home button ကို လွှတ်လိုက်လို့ရပါပြီ .အဲ့ဒီ့မှာလဲ အင်္ဂလိပ်လိုရေးပေးထားပါတယ် . အဓိကက ခလုပ်နှိပ်တာ အရေးအကြီးဆုံးပါပဲ . မနှိပ်တတ်ခင်ကတော့ လက်ရဲမှာမဟုတ်ပါဘူး . သိပ်နားမလည်ရင် movie ကြည့် နဲ့လက်တွေ့လုပ်ထားတာလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . အောက်မှာ Download လုပ်ပြီး သေချာ ကြည့်လိုက်ပါ . Download movie file(Mediaifre)
printer ink cartridges များအတွက် reset website လေးပါ
ဒီဆိုက်လေးကို အမှတ်မထင် တွေ့လိုက်လို့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာပါ . printer ink reset အတွက် အတော်လေးကို ရေးထားတာတွေ့ရပါတယ် . canon, epson နဲ့ အခြား ink cartridges အတွက် အဆင်မပြေသူများ လေ့လာကြည့်ပါ . ဆိုက်လေးက ဒီမှာ ပါ .
Juusan: ညီရေ...WinguardPro 6.56 လေးရှိရင်မျှပါဦး။ Latest Version က ရှိတယ်။ 6.56 က ရှာမရလို.ပါ။ တကယ်အရေးကြီးလို.ပါ။
တင်ပေးလိုက်ပါပြီ . အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် .
thiha: i don't know how to crack for advanced system carecrack ကို သုံးတာကတော့ လွယ်ပါတယ် . တစ်ကယ်တန်း သွားထားရမှာက advanced system care ရဲ့ main rooots မှာ သွားထားရမှာပါ . အောက်ကအတိုင်းလုပ် ကြည့်လိုက်ပါ . တစ်ခြား program တွေလဲ ဒီနည်းအတိုင်းပါပဲ . crack သုံးနည်းကတော့ အတူတူချည်းပါပဲ .မိမိရထားတဲ့ advanced system care ကို install လုပ်လိုက်ပါ အထဲမှာပါလာတဲ့ crack file လေးကို copy ကူးထားလိုက်ပါ . C: >> Program Files >> Advanced System Optimizer3ကိုသွားလိုက်ပါ . ဖိုင်ကို paste မလုပ်ခင် မိမိ install လုပ်ထားတဲ့ program ဖွင့်ထားခြင်း ရှိမရှိ သေချာစစ်ဆေးပါ . ဖွင့်ထားရင် ပိတ်လိုက်ပါ . ကျွန်တော်တို့ Taskbar (နာရီလေးတွေရှိတဲ့ icons တွေထဲ) မှာ လဲ ရှာကြည့်ပါ . advanced system optimizer icon လေးတွေ့တယ်ဆိုရင် right click ထောက်ပြီး exit ပေးလိုက်ပါ .. ကူးယူထားခဲ့တဲ့ crack file ကို paste လုပ်လိုက်ပါ တစ်ခုခုမေးလာရင် ok (သို့မဟုတ်) Ok All ပေးလိုက်ပါ .. ကဲ အခုနက ကျွန်တော်တို့ active မဖြစ်သေးတဲ့ advanced system optimizer ကို ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ . အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေဗျာ .. သိတဲ့သူအဖို့ ရယ်စရာလို ဖြစ်နေပေမယ့် . မသိတဲ့သူအဖို့တော့် အတော်ကို ခက်ခဲမယ်ထင်လို့ ဒီပို့စ်ကို ရေးပေးလိုက်တာပါ . ကလေးကလား ဆန်နေရင်တော့ တောင်းပန်ပါတယ် .
Download လုပ်ချင်သူများအောက်မှာ ယူလိုက်ပါ တောင်းထားတဲ့သူ ရှိလို့ တစ်ခါတည်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ် . ကျွန်တော် ပြန်ပြီးတော့ ရေးပေးပါဦးမယ် . Download ကိုအောက်မှာ ယူလိုက်ပါ Download mediafire
Download ifile.it ၊ Download mediafire Read More
ကဲ ning မှာ ဘယ်လို ဘန်းမလဲနှင့် admin ဘယ်လိုပေးမလဲ
ဒီပို့စ် က ကျွန်တော် အခုနက လုပ်ပြထားတဲ့ ဖိုင်ကို .swf ပြောင်းပြီးတော့ flash player နဲ့တင်ပေးထားတာပါ . စမ်းကြည့်ပါဦး . အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် .. ကြည့်လို့အဆင်ပြေလား မပြေလားလဲ ပြောကြပါဦး . အားလုံးဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် နောက်ပိုင်းကို ကျွန်တော် flash player နဲ့ပဲ တင်သွားပေးပါ့မယ် . ကျွန်တော်လဲ မပင်ပန်းတော့ဘူးပေါ့ . မဟုတ်ရင် ဓါတ်ပုံတွေတင်ရ photsoshop နဲ့ ပြန်ပြီးပြင်ရ upload တင်ရနဲ့ အလုပ်တော့ပိုတယ် . ဒါလေးကို အားလုံးအဆင်ပြေရင်တော့ သဘောတရား လဲနားလည်သွားမယ် . ရှင်းပြရတာလဲ လွယ်ကူတယ်ဗျာ . Read More
ဒီဇင် : Run Box မှာ msconfig ကိုဝင်လို့မရလို့..အကိုရေ..ကူညီပါဦး..အောက်ကအတိုင်း သွားပြီးတော့ MSconfig.exe ကို Double click နှိပ်ရင်လဲရပါတယ် . C:\_WINDOWS\_PCHealth\_HelpCtr\_Binaries\_MSConfig.exe
Windows7XP Mode RTM + Virtual PC 6.1.7600.16393 RTM (x86 / x64)
ညီညီရေ အစ်ကိုတင်ပေးလိုက်ပါပြီကွာ . အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . အဆင်မပြေရင် ဖုန်းလှမ်းဆက်လိုက် ဟုတ်ပြီလား .Microsoft Windows Virtual PC for Windows7- isanew optional component that you can use to evaluate and migrate to the Windows7operating system while maintaining compatibility with applications that run on older versions of Windows. This component is available asadownloadable update package for Windows 7.Download hotfile >> Part(1) ၊ Part(2) ၊ Part(3) ၊ Part(4) ၊ Part(5)
ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော် မကြည့်စေချင်တဲ့ ၀ဘ်ဆိုက်တွေကို ပိတ်နည်းပြောပြပါ့မယ် . နဲနဲလေးကြိုးစားပြီးလုပ်ကြည့်ပါ လွယ်ပါတယ် .. ကဲအောက်ကအတိုင်းလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ .(၁) C:>> WINDOWS >> SYSTEM32 >> DRIVERS >> ETC ကိုဖွင့်လိုက်ပါ .(၂) နောက်ဆုံးဖွင့်လိုက်တဲ့ ETC folder ထဲက HOSTS ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးကို right click ထောက်ပြီးတော့ Notepad နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါ . Notepad ထဲမှာ အောက်ကပုံစံအတိုင်းတွေ့ရမှာပါ . ----------------------------------------------------------------------------# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.## This isasample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.## This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each# entry should be kept on an individual line. The IP address should# be placed in the first column followed by the corresponding host name.# The IP address and the host name should be separated by at least one# space.## Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual# lines or following the machine name denoted bya'#' symbol.## For example:## 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host127.0.0.1 localhost------------------------------------------------------------------------------အဲ့ဒီ့မှာ အောက်ဆုံးက စာလုံးအနီနဲ့ ပြထားတဲ့ 127.0.0.1 localhost ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကိုပိတ်ချင်တဲ့ website ကို ကောက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ . ကျွန်တော့်ဆိုက်ကို ဥမာထားပြီး လုပ်ပြပါ့မယ် ..127.0.0.1 nyinaymin.com127.0.0.1 www.nyinaymin.com127.0.0.1 nyinaymin.net127.0.0.1 www.nyinaymin.netအဲ့လိုရေးတဲ့နေရာမှာ တစ်ခုသတိထားပေးလိုက်ပါ . nyinaymin.com ကို ထည့်တာနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး . www.nyinaymin.com လို့ပါ www. ကိုထည့်ပေးပါ . ဒါမှ ၀င်တဲ့သူက www. နဲ့ဝင်ဝင် www. မပါပဲ ၀င်ဝင် ၀င်လို့မရမှာပါ .. ကဲ ပိတ်ချင်တဲ့ဆိုက်တွေကို အကုန်သာ လိုက်ထည့်လိုက်ပါ .. ပြီးတာနဲ့ notepad ကို save လိုက်ပါ . ဘာညာသာရကာ မေးလာရင် ok ကိုပေးလိုက် . အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ .. Read More
ကို့ကွန်ပျူတာမှာ မ၀င်စေချင်တဲ့ ဆိုက်တွေကို ဘယ်လိုပိတ်ထားမလဲ
ဒါကတော့ ညီလေးတစ်ယောက် မေးထားတာပါ . သူ့ကွန်ပျူတာမှာ မဟုတ်တဲ့ဆိုက်တွေ ပေါ်ပေါ်နေတယ်ပြောတယ် . ညီမတွေ အမေတွေနဲ့ဆိုတော့ အဲ့ဒီ့ဆိုက်တွေက ထထ ပေါ်လာလို့ သူတို့ သုံးလို့မရဘူးလို့ပြောပါတယ် . အခုဟာက အလွယ်နည်းကိုပြောပြမှာ ဖြစ်ပါတယ် .. အဲ့လို ထထ ပြီးပေါ်လာတဲ့ ဆိုက်ကို ပိတ်ပစ်လိုက်ပါ . နောက်ထပ် ပေါ်လာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး .. နောက်ထပ်လဲ ထပ်ပြီးတော့ ရေးပေးပါဦးမယ် . အခုဟာက အမြန်နည်းပါ . internet explorer နဲ့ ပိတ်နည်း( 1) IE ကို ဖွင့်လိုက်ပါ . ( 2) Tools >> internet option >> security ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ . ( 3) Restricted sites ဆိုတဲ့ အနီရောင် ကြက်ခြေခတ်လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ . ( 4) ပြီးရင် သူ့ရဲ့ အောက်မှာ sites ဆိုတာရှိတယ် . အဲ့ကောင်လေးကို ဆက်ပြီး နှိပ်လိုက်ပါ( 5) အဲ့မယ် ပေါ်လာတဲ့ အကွက်မှာ ကိုမလိုတဲ့ဆိုက်တွေကို ထည့်ပြီးတော့ add လိုက်ပါ . အဆင်ပြေပါစေဗျာ .
ကဲအောက်မှာတင်ပေးလိုက်ပါပြီ တစ်ခါတည်း patch ကိုပါ တွဲပြီး တင်ပေး ထားပါတယ် . အတော်လေးကို ရှာလိုက်ရတယ် . အဆင်ပြေပါစေဗျာ . အသုံးပြုပုံ အသုံးပြုနည်း ကတော့ ကျွန်တော်လဲ မစမ်းရသေးဘူး . . ကျွန်တော်လဲ သုံးကြည့် လိုက်ပါဦးမယ် . ပြီးတာနဲ့ ပြန်ပြီးတော့ အသုံးပြုနည်းကို တင်ပေးပါ့မယ် .. အောက်မှာ ယူလိုက်ပါဗျာ .
win rar မှာ password ပေးထားတဲ့ဖိုင်တွေကို ဘယ်လိုပြန်ဖော်မလဲ .
(၁) install လုပ်ပါ
(၂) ပုံ-၁ အတိုင်း start >> Programs >> Rar password recovery >> Rar password recovery ကိုသွားလိုက်ပါ .
(၃) right click ထောက်ပြီး properties ကိုဝင်ပါ .
(၄) find target ကို နှိပ်လိုက်ပါ .
(၅) အပေါ်က download ဖိုင်ထဲမှာပါတဲ့ crack ကို copy ကူးပြီး paste လုပ်လိုက်ပါ .
(၆) ပုံ-၃ အတိုင်းမေးလာရင် Ok ပေးလိုက်ပါ . အဲ့ဒါဆိုရင် လိုင်စင်နဲ့ဖြစ်သွားပါပြီ .
(၇) တင်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ rar passwrod recovery ကို ဖွင့်လိုက်ပါ .
(၈) open >> add ကို နှိပ်ပြီးတော့ password ရှိတဲ့ rar ဖိုင်ကို ဖွင့်လိုက်ပါ .
(၉) start ကို နှိပ် ပေးလိုက်ပါ ...
(၁၀) ပုံ-4 မှာကိုကြည့်ပါ သူစပြီးတော့ password ကို ဖော်နေပါပြီ .